HTC kwụsịrị ire igwe ya na ụlọ ahịa dị iche iche na China | Gam akporosis
Edere Ferreno | | HTC, Mobiles
Ọnụnọ nke HTC na ahịa belatara budata na-adịbeghị anya. Nsonaazụ ahịa na-adịghị mma emeela ka ọrụ ha belata na na na ụfọdụ ahịa ha na-atụle ịnye ikikere ikikere ha, dị ka ụzọ iji belata gị na-akwụ ụgwọ. Na mgbakwunye, ụlọ ọrụ ahụ nwere ike ịmalite ịkwụsị ire ahịa na ụfọdụ ahịa, atụmatụ nke anyị hụrụ na nso nso a na ụlọ ọrụ ọzọ na nsogbu. dị ka Sony.
Ugbu a abiala ozi ohuru banyere HTC. Ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ nwa oge ịkwụsị ire igwe ha na China. Offọdụ ụlọ ahịa kachasị na mba ahụ ga-akwụsị ire ha. Maka ugbu a, ha nwere ike zụta naanị na weebụsaịtị nke ụlọ ọrụ ahụ.
Mana ọbụlagodi na weebụsaịtị ụlọ ọrụ ahụ enwere nsogbu. N'ezie, ọtụtụ ekwentị HTC gosipụtara na enweghị ngwaahịa, ya mere enweghi ike izuta ha. Mkpebi a, nke ụlọ ọrụ ahụ kwuru na ọ ga-adịru nwa oge, na-ada ka usoro tupu ụlọ ọrụ ahụ apụ na ahịa ndị China.
N’oge na-adịbeghị anya, ekpughere na nkewa ekwentị ka dị na-ewepụta ọtụtụ nde mfu maka ụlọ ọrụ. Mgbe nkewa ndị ọzọ, dị ka VR nweta nsonaazụ dị mma. O yiri ka ọ bụ kpọmkwem nkewa VR a ka ụlọ ọrụ ahụ na-achọ ịkwalite na ahịa na China maka ọdịnihu.
HTC ekwughị ihe ọ bụla banyere atụmatụ ya n'ọdịnihu na China, maka ekwentị. Mana ịkọ nkọ banyere nkwụsị doro anya nke ika a akwụsịbeghị, kemgbe ọkwa a. Na akụkụ ọ bụghị ihe ijuanya, na-ahụ nsonaazụ ya na-adịghị mma. Ọ ga-abụ ihe ezi uche dị na ha nzọ na-elekwasị anya na a ole na ole ahịa ebe ha na-ere ọma.
Anyị ga-ege ntị nke ọma n'ihe na-eme n'izu ndị na-abịa. Karịsịa iji hụ ma a mara ọkwa ọnọdụ yiri ya na mba ndị ọzọ. HTC kwughachiri na ihe karịrị otu oge ebumnuche ha ịnọgide na-ebupụta ekwentị na 2019. Na mgbakwunye, awa ole na ole gara aga ka a mara ọkwa ya mbupute nke mbụ ya n’afọ a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » HTC ịkwụsị ire igwe na China
Samsung na Huawei ụdị ndị na-emefu ego na R&D